गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत ‘पिर’ले सिर्जना गरेको प्रतिक्रिया — donnews.com
कला/साहित्य प्रमुख समाचार भिडियो मनोरञ्जन
'हिजो जनमुक्तिका निम्ति बन्दुक बोक्नेहरु पेट पाल्न देह बेच्दैछन् । तीतो सत्य स्वीकारौं': डा.बाबुराम भट्टराई
पोखरा, २९ फागुन । गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत ‘पिर’ सार्वजनिक भएसँगै यसका विषयमा फरक–फरक टिप्पणी र आक्रोशहरु आईरहेका छन् । माओवादी जनयुद्धपश्चात् कार्यकर्ताको सही व्यवस्थापन र उद्देश्यमा अडिग रहन नसकेको माओवादी नेतृत्व र विचलित कार्यकर्ताको अवस्थालाई चित्रण गरिएको यस गीतमा एक छापामार महिलालाई यौनकर्मीका रुपमा देखाईएको दृश्यप्रति धेरैले विरोध गरिरहेका छन् ।
जनयुद्धको नायक मध्येका एक डा.बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्-‘‘तथ्यबाट सत्य खोज’ माक्र्सेली चिन्तनपद्धतिले भन्छ । अनुसन्धानको क्रममा मैले प्रत्यक्ष बुझेको छु– महिलाहरु ऋाफ्नो सन्तान र लोग्नेको उपचारनिम्ति देह बेच्न बाध्य छन् । हिजो जनमुक्तिका निम्ति बन्दुक बोक्नेहरु पेट पाल्न देह बेच्दैछन् । तीतो सत्य स्वीकारौं, समाधान खोजौं । प्रकाश सपुतलाई नसरापौं ।’
शुक्रबार युट्युवमार्फत् सार्वजनिक भएको यो गीत २४ घण्टा पनि नबित्दै ५ लाखभन्दा बढि दर्शकले हेरिसकेका छन् भने सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक चर्चा र आक्रोश व्यक्त भईरहेका छन् । यस गीतमा प्रकाश सपुतले प्रयोग गरेको गीतका शब्दहरु मार्मिक र यथार्थपरक भएको भन्दै धेरैले यसले माओवादीको अहिलेको यर्थाथलाई उजागर गरेको भनेर विचार व्यक्त पनि गरिरहेका छन् ।
गीतमा जनयुद्धमा सहभागी भएका दम्पत्ति जो युद्धमा गोली लागेर घाईते भएका छन् । उनीहरु मध्ये श्रीमान् अपाङ्ग छन् र दैनिक जिविकोपार्जन गर्न कष्ठकर भईसकेपछि श्रीमती जो लडाकु थिईन् र शरिरमा गोली लागेको थियो उनी वाध्य भएर सानी छोरी छोडेर विदेशिनु परेको र विदेशमा समेत बन्धक हुन पुगेपछि स्वदेश फर्किनका लागि याचना गरेको कारुणिक दृश्य समावेश गरिएको छ ।
धेरै चेलीहरु विदेशमा यसरी नै बन्धक बनाईने र उनीहरुको अवस्था यो भन्दा पनि कहालाी लाग्दो भएको यर्थाथ नै हो । अझ, अपाङ्ग भएका उनका श्रीमान् आफ्नी श्रीमतीलाई बचाई दिन हारगुहार गर्दै सँगै माओवादी जनयुद्ध लडेका तर अहिले मन्त्री भएका पात्र समक्ष पुग्दछन् । जो हिजो जनयुद्धमा भागेर आफ्नो ज्यान बचाएका स्वार्थी र फटाहा पात्र हुन् । उनले ती सहकर्मी योद्धाको पीरमर्का सुन्दैनन् र गाडी हुईक्याएर कुद्छन् । यस्ता दृश्यहरुलाई भने कसैले विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जनयुद्धका क्रममा सेना र प्रहरीकोमा सुराकी गर्ने, त्यहीँ क्वाटरमा रक्सी खाएर सुत्ने र जासुसी गर्नेहरु यतिबेला नेतृत्वको वरिपरि घुमिरहेका छन् र सबैभन्दा बढि स्वार्थपूर्ति गरिहेका छन् । जसले जनयुद्धमा दोहोरो फाईदा उठाए आज उनीहरु कै हालिमुहालीका कारण माओवादी आमजनतामा क्रमशः अलोकप्रिय हुँदै गएको तीतो यर्थाथतालाई पनि यस गीतले राम्रैसँग प्रस्तुत गरिदिएको छ ।
जनयुद्धका महानायक भनेर चिनिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरु यतिबेला ती युद्धमा समावेश भएर टुहुरा भएका सहिदका सन्तान, अपाङ्ग, घाईते र वेपत्ताको परिवारकोमा पुग्दैनन् । सिधै दलाल, तस्कर र माफियाहरुको घरमा पुगेर खाना खान्छन्, बस्छन् र रमाउँछन् । के यस्ता घटनाहरु प्रकाश सपुतले बनाएको गीत भन्दा अझै कहालीलाग्दो र पीडादायक छैनन् र ?
जनयुद्धमा सहभागी हजारौं लडाकुहरु यतिबेला मरुभूमिको तातो हावामा भेँडा चराउँदै छन् । कतिले अपाङ्ग भएर जीवन सडकमा बिताई रहेका छन् । यसप्रति जनयुद्धको २० औं बर्ष पार भईसक्दा पनि नेतृत्वले सोच्नु पर्ने होइन र ? एकपटक प्रकाश सपुतको गीतले सहिदको रगत र बलिदानमाथि रजाईँ गर्नेहरुको मथिङगल भने राम्रैसँग हल्लाई दिएको छ ।
माओवादी जनयुद्धपछि अवसरवादी, फटाहा, तस्कर र भ्रष्टहरुले सत्तामा पहुँच पुर्याएको अवस्था यर्थाथ नै हो । जसले जनयुद्धमा परिवार गुमाए, अपाङ्ग भए र परिवारका सदस्य वेपत्ता पारिए ती सोझासाझाले भने आजसम्म पनि सास्ती भोग्नुपरेको कथा यर्थाथ नै हो, जुन प्रकाशले भिडिओमा देखाउन खोजेका छन् ।
जे जस्तो चर्चा परिचर्चा भए पनि यस भिडियोले एकपटक समग्र जनयुद्ध र त्यसको उपलब्धिको अवस्थालाई आमजनतामाझ नङ्गयाई दिएको छ । सो भिडिओमा प्रकाश सपुतसँगै नायिका सुरक्षा पन्त देखिएकी छन् । आरन प्रोडक्सनले उत्पादन गरेको गीतमा प्रकाश सपुतको आवाज छ भने सम्झना भण्डारीले पनि स्वर भरेकी छन् । गीतमा प्रकाश सपुतको नै शब्द र संगीत रहेको छ । भिडिओको कथा तथा निर्देशन पनि गायक प्रकाश सपुतले गरेका छन् । प्रकाश सपुतको यो गीतसँगै सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरु जस्ताको तस्तै :